July 2020 - Page 3 of 3 - Puntland Mirror Believable Media Website
July 5, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shir ay Dowladda Federaalka Soomaaliya ku casuntay madaxda dowlad goboleedyada oo qorshuhu ahaa in uu Muqdisho ka furmo July 5, 2020 ayaa dib u dhacay. Ujeedada rasmiga ah ee sababtay dib u dhaca […]
July 4, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) 16,500 arday ah oo ka socda Fasalka 4-aad ee dugsi sare iyo Fasalka 8-aad ee dugsi dhexe ayaa maanta oo Sabti ah bilaabay in ay u fariistaan imtixaankooda ugu dambeeya gudaha Puntland. 5,447 […]
July 3, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa lumisay ilaa $40 milyan oo dakhli ah intii lagu guda jiray bilihii u horeysay ee sanadkan 2020 coronavirus dartiis, sida ay sheegtay Wasaaradda Maaliyada. Dakhliga ayaa la filayay in uu […]
July 1, 2020 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in uu aqbalayo baaqii kasoo baxay baarlamaanka Puntland ee dowladda u sheegayay in aysan ka qeybgalin shirka Muqdisho. “Waxaan soo dhaweynayaa baaqii ka soo baaxay […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddiga dowladda loo xilsaaray xalinta qiima dhaca ku yimdi Shillin Soomaaliga gudaha Puntland ayaa soo saaray awaamiir cusub oo ay kamidyihiin in canshuurta dekada 20% lagu bixiyo Shillin Soomaali.